သူငယ်ချင်းသို့ (Forward Mail) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူငယ်ချင်းသို့ (Forward Mail)
သူငယ်ချင်းသို့ (Forward Mail)
Posted by moonpoem on Jun 24, 2011 in Copy/Paste |5comments
သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကို မထင်မှတ်တဲ့ နေရာမှာ မထင်မှတ် ဘဲ
(ကြိုက်လို့ Shareပြီး ပို့စ်လုပ်တာပါ။ တင်ထားပြီးသား ရှိသလားတော့ မသိဘူးပေါ့နော် တူနေခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ)
သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကို မထင်မှတ်တဲ့ နေရာမှာ မထင်မှတ် ဘဲ ကောက်တွေ့ခဲ့ ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း အချို့ဟာ မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း တွေ ဖြစ်လာခဲ့ တယ်။ လူချင်းမမြင်ဖူးဘဲ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိတယ်။ လူချင်း မြင်ဖူးပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ ရှိတယ်။ အိမ်မှား ၀င်ပြီး ခင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသလို မတော်တဆ တိုက်မိပြီး ခင်ခဲ့ ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေလည်း ရှိတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေမှာ အသက် အပိုင်းအခြား မရှိဘူး။ ကိုယ့်နဲ့ ရွယ်တူလည်းရှိတယ်။ ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ ငယ်တဲ့ လူလည်း ရှိတယ်။ ကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကနေ ကိုယ့်မှာ မရှိသေးတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ယူတယ်။ ငယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ ကိုယ့်မှာရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ ရိုးသားမှုတွေကို ပြန်ရှာတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေမှာ အသက်အရွယ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မခွဲခြားဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေဟာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ပြောင်းနေတဲ့ ရာသီတွေနဲ့ တူတယ်။
တချို့က ပူပြင်းတဲ့ နွေနဲ့တူတယ်။ တချို့က နွေရဲ့ အပူဒဏ်ကို လျော့ပေးတဲ့ မိုးနဲ့တူတယ်။ တချို့က အေးမြတဲ့ ဆောင်းနဲ့တူတယ်။ မတူညီတဲ့ ရာသီရဲ့ အလှပတွေကို ခံစားရင်း ကိုယ့်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ သူတို့နဲ့ ကိုယ်ဘယ်လို စသိ စခင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာ၊ ၀မ်းသာစရာတွေနဲ့ ကြုံတိုင်း သူတို့ကို ကိုယ်ရင်ဖွင့်ချင်ခဲ့တယ်။ ထူးဆန်းတာတွေကို မြင်တိုင်း သူတို့နဲ့ ကိုယ်မျှဝေချင်ခဲ့တယ်။
ကွန်ပြူတာရဲ့ ဟိုတစ်ဖက်မှာ ထိုင်ပြီး ကိုယ်မျှဝေတဲ့ အရာတွေကို သူတို့ကြည့်ပြီး ပျော်နေမလား…. မေးလ်ဘောက်စ် ပြည့်သွားတာ ကိုယ့်စာကြောင့်လို့ စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ငြီးငြူနေမလား… ဘာတွေ လျောက်ရေးထားလဲ မသိဘူးဆိုပြီး မဲ့နေမလား….
သတိရကြောင်း၊ လွမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ဖော် မပြောပြတတ်လို့ အေးစက်တဲ့ ကွန်ပြူတာ က တဆင့် ဒီကမ္ဘာရဲ့ ထောင့်တစ်နေရာကနေ သူငယ်ချင်းတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့ နွေးထွေးတဲ့ ကိုယ်မေတ္တာနဲ့ တောင်းဆု ပြုလိုက်တယ်။
moonpoem ဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ လိုက်အောင်ပဲ moonpoem က သူငယ်ချင်းကို အေးမြစေမယ်ထင်တယ်။ မမြင်ရတဲ့ အဒိတ္ထာ သဟာယဆိုတဲ့ ကွန်ပြူတာ ဟိုတစ်ဖက်က သူငယ်ချင်းတွေကို moonpoem နဲ့အတူ (လိုအပ်သောဆု မြတ်သောဆုများနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ) လို့ ဆုတောင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါသည်။
သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေ ဆိုတာ တကယ့်ကို လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။
ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း ဖြစ်ရတာ ၊ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ရတာ ဟာ ၀မ်းသာစရာပါ။
အရင် ဘ၀ တွေက ရေစက်တွေ ရှိခဲ့လို့ ဒီဘ၀ မှာ ပြန်ဆုံတွေ့ကြရတာပဲ ။ ကိုယ်နဲ့ အနီးဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေပေမဲ့လည်း ခင်မိချင်မှ ခင်မိတတ်တာ။ တခါတလေ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းလေး နဲ့ပဲ ခင် မင်သွားပြီး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားတာတွေလည်း ရှိတတ်တာပဲ။ သူငယ်ချင်း ဖြစ်လာမှတော့ သူလိုအပ်တာလည်း ကိုယ်ကူညီ .. ကိုယ် အကူအညီလိုလည်း တိုင်ပင် နိုင်တာပေါ့ ။ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်း မှီ အပြန်အလှန်ကူညီပေးကြရင်းနဲ့ တသက်လုံးနေသွားလို့ ရတယ် ။
သူငယ်ချင်း ရှေ့ ဆက် မင်းဘဝမှာ အမြဲ ချိုမြိန်ပါစေ
တခါတရံ မှာ ခါးသီးလည်း ကျော်ဖြတ်လိုက်ပေါ့လေ
ဘယ်သောခါမှ မမေ့ကြေး…။ ။
(ပို့စ်တင်ချင်သော်ငြားလည်း ကော်နက်ရှင်က new post ကိုပင် ခေါ်ခွင့်မပေးသောကြောင့် comment အဖြစ်နှင့်သာ တင်လိုက်ရပါကြောင်း…)
အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။